के नेकपा फुटपछि चीनले नेपाल नीतिमा ‘कोर्स करेक्सन’ गर्दैछ ? - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeदेशके नेकपा फुटपछि चीनले नेपाल नीतिमा ‘कोर्स करेक्सन’ गर्दैछ ?
काठमाडौं । केही महीना अगाडिसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीबीच बारम्बार भेटघाट हुन्थ्यो । राजदूत होउ शितलनिवास पुगेको खबर पनि बाक्लै आउँथ्यो ।
त्यसको तीन हप्ता पछाडि नेपालले खोप लिन नेपाल एयरलाइन्सको विमान पठायो । जबकी, सहयोगको घोषणा गरेको केही घण्टामै चार्टर्ड विमानद्वारा खोप काठमाडौं पठाउने सामर्थ्य बेइजिङ्गसँग छ । विगतमा नेपाललाई संकट पर्दा त्यसै गरेको पनि थियो । यससँगै अर्काे प्रश्न पनि छ– चीनबाट खोप ल्याउन नेपाललाई किन तीन हप्ता लाग्यो ?
त्यसैले विश्लेषकहरुका अनुसार चीनले अब एउटा पार्टीमा बढी निर्भर हुने आफ्नो नीतिमा गम्भीर समीक्षा गर्दै विगतमा जस्तै सबै साना–ठूला राजनीतिक दलसँग समदुरी कायम राख्ने र नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ । विगत ३ वर्षको नेपाल नीतिको गम्भीर समीक्षा गर्दै नेपाल नीतिलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने गृहकार्य समेत गरिरहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । onlinekhabar
Previous articleपुरानो नक्सा भएको पाठ्यपुस्तकको पाना फेरिने
Next articleयौन जीवनका १० संकेत, जसले साथीको स्वार्थ पत्ता लगाउन सक्छ